မာဆင်ဂရင်းဝုဒ်(သို့) ကြယ်တစင်းလင်းလက်ခြင်း ပုံပြင် - UMN
လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက် ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့်တန်းမှာ ဂဏန်းနှစ်လုံး အရေတွက် ရှိတဲ့ ဂိုးရဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဒီအခြေနေက ဂန္နဝင်တွေပဲ လုပ်ပြခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာတော့အသေချာပါပဲ။ လာလီဂါ၊ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၊စီးရီအေ တို့လို လိဂ်တွေမှာ သိပ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ကစားသမားတွေတောင် ပရီးမီးယားလိဂ်ရောက်လာရင် ရုန်းကန်နေရတဲ့ အခြေနေက လူငယ်တစ်ယောက်အတွက် ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲစေနိုင်တာအသေချာပါပဲ။
အထူးသဖြင့် အသက် (၁၈)နှစ်နဲ့ ပထမဆုံးစနီယာ ကစားသမားဘဝမှာပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြောစမှတ်တွင်လောက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ အတော်လေးအလှမ်းဝေးပါတယ်။ ဒါကိုပဲ မေဆင်ဂရင်းဝုဒ်က လုပ်ပြခဲ့ပြီး သူဟာ မဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်တဲ့ G.O.A.T လို့ ဗန်းစကားနဲ့တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ ဂန္နဝင်တွေရဲ့ ခြေရာကိုမှ ထပ်တူ လိုက်နင်းခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်တယ်။
မေဆင်က အခုမှ မဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကို လုပ်ပြနေတာတော့မဟုတ်။အသက်(၁၆)နှစ်နဲ့ U(18) မှာ ပွဲထွက်ပြီး ဂိုး (၃၀)ကျော်သွင်းခဲ့ပြီးပြီ။နောက်တစ်ရာသီမှာ U(18)-(23) ကိူ ကူးလူးကစားနေပြီ။ ဆိုးလ်ရှားနည်းပြဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲ ချဲလ်ဆီးလူငယ် အသင်းကိူ ဟက်ထရစ် သွင်းပြီး ယူနိုက်တဒ်ရုံးခန်းတံခါးကိူ ဂိုးတွေပွေ့ပိုက်ပြီး လာခေါက်နေပြီ။ မေဆင် အတွက်ဆိုးလ်ရှား ရင်းခဲ့တာတွေကလည်း မနည်းလှတာတော့ အသေချာပါပဲ။ ဆန်းချက်ဇ်၊လူကာကူ အပြင် ရာသီဝက်မှာ ဂျိမ်စ်း ကိုပါ ခေါက်ပြီး မေဆင် အတွက်နေရာတစ်ခု သူဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။
ဒီရာသီ လိဂ် (၁၀) ဂိုးရရှိထားပြီး (၅)ဂိုးက သရေနဲ့အနိုင်ဂိုးတွေဖြစ်နေတာက မေဆင်ဟာ ပွဲအဖြေပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ကစားသမားဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ အလန်ရှီးယားလို ချီးကျူးလေ့မရှိ တဲ့ ကစားသမားကတောင်သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံးစံချိန်အတွက်စိတ်ပူမိတယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့တာက မေဆင်ဂရင်းဝုဒ် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်စွမ်းအပေါ် ခန့်မှန်းလို့ရနိုငိပါတယ်။သူဒီရာသီဖြတ်ချိုးခဲ့တဲ့ စံချိန်ရှင်တွေက ဂျော့ဘတ်စ်၊မက်ကလဲ၊ဝိန်းရွန်းနီ၊မိုက်ကယ်အိုဝင် တို့ရဲ့ စံချိန်တွေ။ သူကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စံချိန်ရှင်တွေ၊သူ့ရဲ့သွင်းဂိုးအဆင့်အတန်း၊ ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ ကာရင်တန်ထုတ် အရည်သွေးမြင့်ထုတ်ကုန်၊ အသင်းတစ်သင်းလုံးနဲ့နည်းပြရဲ့အရေးပေးမှု့၊ ပင်ကိုယ်ပါရမီ အရာအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်ရင် မေဆင်ဂရင်းဝုဒ် ဟာ လာမယ့် ဆယ်ရာသီလောက်အတွင်း အိုးထရဒ့်ဖိုဒ့်ရဲ့ အလယ်တည့်တည့် မှာ လင်းလက်မယ့် ကြယ်တစ်စင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး ဘယ်သူပြောရဲမလဲ?
လူငယျကစားသမားတဈယောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ အဆငျ့တနျးမှာ ဂဏနျးနှဈလုံး အရတှေကျ ရှိတဲ့ ဂိုးရဖို့ဆိုတာက မဖွဈနိုငျတာတော့မဟုတျပမေယျ့ ဒီအခွနေကေ ဂန်နဝငျတှပေဲ လုပျပွခဲ့တဲ့ လုပျရပျဆိုတာတော့အသခြောပါပဲ။ လာလီဂါ၊ဘှနျဒကျဈလီဂါ၊စီးရီအေ တို့လို လိဂျတှမှော သိပျကောငျးပါတယျဆိုတဲ့ ကစားသမားတှတေောငျ ပရီးမီးယားလိဂျရောကျလာရငျ ရုနျးကနျနရေတဲ့ အခွနေကေ လူငယျတဈယောကျအတှကျ ဆိုရငျ ပိုပွီးတော့ ခကျခဲစနေိုငျတာအသခြောပါပဲ။
အထူးသဖွငျ့ အသကျ (၁၈)နှဈနဲ့ ပထမဆုံးစနီယာ ကစားသမားဘဝမှာပဲ တဈကမ်ဘာလုံးက ပွောစမှတျတှငျလောကျအောငျ လုပျဖို့ဆိုတာကတော့ အတျောလေးအလှမျးဝေးပါတယျ။ ဒါကိုပဲ မဆေငျဂရငျးဝုဒျက လုပျပွခဲ့ပွီး သူဟာ မဖွဈနိုငျခွငျးတှကေို ဖွဈအောငျလုပျပွနိုငျတဲ့ G.O.A.T လို့ ဗနျးစကားနဲ့တငျစားချေါဝျေါတဲ့ ဂန်နဝငျတှရေဲ့ ခွရောကိုမှ ထပျတူ လိုကျနငျးခဲ့တဲ့ သူလညျးဖွဈတယျ။
မဆေငျက အခုမှ မဖွဈနိုငျခွငျးတှကေို လုပျပွနတောတော့မဟုတျ။အသကျ(၁၆)နှဈနဲ့ U(18) မှာ ပှဲထှကျပွီး ဂိုး (၃၀)ကြျောသှငျးခဲ့ပွီးပွီ။နောကျတဈရာသီမှာ U(18)-(23) ကိူ ကူးလူးကစားနပွေီ။ ဆိုးလျရှားနညျးပွဖွဈတဲ့နမှေ့ာပဲ ခြဲလျဆီးလူငယျ အသငျးကိူ ဟကျထရဈ သှငျးပွီး ယူနိုကျတဒျရုံးခနျးတံခါးကိူ ဂိုးတှပှေပေို့ကျပွီး လာခေါကျနပွေီ။ မဆေငျ အတှကျဆိုးလျရှား ရငျးခဲ့တာတှကေလညျး မနညျးလှတာတော့ အသခြောပါပဲ။ ဆနျးခကျြဇျ၊လူကာကူ အပွငျ ရာသီဝကျမှာ ဂြိမျဈး ကိုပါ ခေါကျပွီး မဆေငျ အတှကျနရောတဈခု သူဖနျတီးပေးခဲ့တယျ။
ဒီရာသီ လိဂျ (၁၀) ဂိုးရရှိထားပွီး (၅)ဂိုးက သရနေဲ့အနိုငျဂိုးတှဖွေဈနတောက မဆေငျဟာ ပှဲအဖွပွေောငျးလဲနိုငျစှမျးရှိတဲ့ ကစားသမားဆိုတာကိုဖျောပွနပေါတယျ။ အလနျရှီးယားလို ခြီးကြူးလမေ့ရှိ တဲ့ ကစားသမားကတောငျသူ့ရဲ့ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးစံခြိနျအတှကျစိတျပူမိတယျလို့ ဝနျခံခဲ့တာက မဆေငျဂရငျးဝုဒျ ရဲ့ ဖွဈနိုငျစှမျးအပျေါ ခနျ့မှနျးလို့ရနိုငိပါတယျ။သူဒီရာသီဖွတျခြိုးခဲ့တဲ့ စံခြိနျရှငျတှကေ ဂြော့ဘတျဈ၊မကျကလဲ၊ဝိနျးရှနျးနီ၊မိုကျကယျအိုဝငျ တို့ရဲ့ စံခြိနျတှေ။ သူကြျောဖွတျခဲ့တဲ့ စံခြိနျရှငျတှေ၊သူ့ရဲ့သှငျးဂိုးအဆငျ့အတနျး၊ ယူနိုကျတဒျရဲ့ ကာရငျတနျထုတျ အရညျသှေးမွငျ့ထုတျကုနျ၊ အသငျးတဈသငျးလုံးနဲ့နညျးပွရဲ့အရေးပေးမှု့၊ ပငျကိုယျပါရမီ အရာအားလုံးပေါငျးစပျလိုကျရငျ မဆေငျဂရငျးဝုဒျ ဟာ လာမယျ့ ဆယျရာသီလောကျအတှငျး အိုးထရဒျ့ဖိုဒျ့ရဲ့ အလယျတညျ့တညျ့ မှာ လငျးလကျမယျ့ ကွယျတဈစငျးမဖွဈနိုငျဘူး ဘယျသူပွောရဲမလဲ?
Previous Article ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီ ယူနိုက်တဒ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားများ
Next Article ယူနိုက်တက်နဲ့ သင့်တော်မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုး